Kukhuzwa eyezidakamizwa nama ‘scrap yard’ e-Ashdown nasePeacevale | News24
Kukhuzwa eyezidakamizwa nama ‘scrap yard’ e-Ashdown nasePeacevale
ISITHOMBE:sithunyelwe Ubuholi besifunda sase Mgungundlovu namalunga omphakathi abeyingxenye yemashi yokulwisana nobugebengu endaweni yase-Ashdown ngoLwesihlanu.
IKHANSELA lakwaward 23 uMnu Dumisani Phungula usegxeke izidakamizwa nokwanda kwezindawo ezigaya izinsimbi (scrap yard) e-Ashdown nasePeacevale njengezinto ezihamba phambili ekunyukeni kwezinga lobugebengu kule ndawo.
UPhungula ukusho lokhu emva kokuba ubuholi besifunda saseMgungundlovu buhlanganyele namaphoyisa noMnyango wezokuThutha nokuPhepha koMphakathi kulesi sifundazwe, bube nemashi kule ndawo ngoLwesihlanu lapho bekuqwashiswa umphakathi ngobugebengu. Le mashi ibiqwashisa ngokubulawa kwamaphoyisa, ukunukubezwa kwabesifazane ngokocansi, ukusetshenziswa kwezidakamizwa, ukuhlukunyezwa kwezingane, ubugebengu nokungabekezelani ngokwezepolitiki.
UPhungula uqhube ngokuthi izigameko zakamuva zokunukubezwa ngokocansi kwabesifazane okubalwa kubo umfundi wesikole, ziwuthukuthelise kakhulu umphakathi okwenze babone ukubaluleka kokuqwashisa umphakathi ngobugebengu.
Uthe: “Ngale mashi besihlose ukuqwashisa umphakathi ngezinhlobo zobugebengu nokukhuthaza ubudlelwano phakathi kwamaphoyisa namalunga omphakathi. Amalunga omphakathi iwona aziyo ngobugebengu obenzekayo ezindaweni zawo, ngakho iwona okufanele asebenzisane namaphoyisa ukuqinisekisa ukuthi umthetho udlala indawo yawo.
“Sikhathazekile kakhulu ngezinga lobugebengu eliphezulu kule ndawo. Ezinye zezinto ezinomthelela ukugcwala kwezindawo ezigaya izinsimbi ezidayisa izinto ezintshontshiwe nokudayiswa kwezidakamizwa, okuthi uma sezingenile egazini kulabo abazisebenzisayo, bagqekeze imizi yabantu baphinde balimaze nezikhungo zomphakathi. Siyawasola kakhulu ama ‘scrap yard’ njengezinye yezinto ezikhuthaza ubugebengu endaweni.
“Sikhathazekile ukuthi isiteshi samaphoyisa siseduze kakhulu kwale ndawo, kodwa kunezindawo ezidayisa izidakamizwa ezakhelene naso. Emva kwale mashi silindele ukuthola indlela eya phambili esizosebenzisana ngayo namaphoyisa ukunqoba ubugebengu nezidakamizwa.
UPhungula uphethe ngokuthi kumanje aqalile amaphoyisa ehambela indawo ebheka izinto ezonakele, okuyinto athemba ukuthi izoqhubeka njalo. Elinye ilunga lo mphakathi elingathandanga ukudalulwa lithe sebehlale bezikhiyele ezindlini, ikakhulukazi omama nogogo njengoba abadli be ‘whoonga’ bedlangile, begasela emizini yabantu nasemini ka bha.
Okhulumela amaphoyisa asePlessislaer Cluster uKapteni Musa Ntombela uthe ubugebengu kule ndawo buyafana nakwezinye izindawo, akumashwa ngoba budlulele kunezinye izindawo.
Uthe: “Ukuqwashisa umphakathi ngobugebengu uhlelo amaphoyisa aselenzile nakwezinye izindawo okubalwa Imbali, Dambuza, KwaPata, nase Taylor’s Halt futhi sizoqhubeka sihambele nezinye izindawo.
“Kula mamashi sisuke singena imizi ngemizi sikhipha amaphepha sifundisa abantu ngezinhlobo zobugebengu. Siyayinxusa imiphakathi ukuba isebenzisane nathi ukuze izigilamkhuba zivalelwe.”
LIVE: Kathrada letter was not faked, says Barbara Hogan at #ANC54 conference